सेयर बजारमा ‘बुल’ सकिएको हो, कस्ता छन् बजार घट्ने आधार? :: कमल नेपाल :: Setopati
सेयर बजारमा ‘बुल’ सकिएको हो, कस्ता छन् बजार घट्ने आधार?
भदौ २ गते सेयर बजारको परिसूचक नेप्सेले नयाँ कीर्तिमानी ३१९८ कायम गर्‍यो। त्यसयता बजार घटिरहेको छ।
बुधबार परिसूचक ३०७६ मा झरेको छ। मंगलबार ५६ र बुधबार ४८ अंकले बजार घटेको हो।
परिसूचक मात्रै होइन, कारोबार रकम पनि घटिरहेको छ। भदौ ३ गते साढे २० अर्बको कारोबार भएकोमा हिजो मंगलबार १६ र आज १२ अर्बमा सीमित भयो।
सेयर बजार बढ्नु र घट्नु यसको विशेषता नै रहे पनि उच्च अंकको कीर्तिमानी कायम गरेपछिको गिरावट पनि ठूलै हुने गरेको छ। कतिपयले यो बजार घटाइलाई ‘बुल’ को चरण नै सकिएको दावी गर्छन्। कतिपयले भने यो सामान्य सुधार मात्रै रहेको तर्क गर्छन्।
खासगरी बजारमा यतिबेला सेयर किनेर बसेकाले बुल आउनै बाँकी छ भन्ने हल्ला गर्ने गरेका छन् भने बेचेर बसेकाले बुल सकिएको दावी गर्दै आएका छन्। तर बजारलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरू कति शक्तिशाली छन् भन्नेमा निर्भर रहन्छ।
बजारको उतारचढावमा मुख्यतः सैद्धान्तिक पक्षहरु बढी महत्वपूर्ण हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले सेयर धितोमा १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गर्नुले नै बजारलाई असर पारेको बताउँछन् सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद फुल्लेल।
राष्ट्र बैंकले गरेको यो गलत व्यवस्था सच्चिनुपर्ने फुल्लेलको तर्क छ।
‘हामीसँग सम्पत्ति छ, हाम्रो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन किन नपाउने, त्यसको जोखिम त अरूले लिइदिनु पर्दैन। व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकारमा नियामकले बन्देज लगाउन मिल्छ र?,’ उनले प्रश्न गरे।
अहिलेको गिरावट केही दिनमै अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। कारोबार रकम घट्नुले पनि त्यो संकेत गरेको उनी बताउँछन्। यसको अर्थ लगानीकर्ता आत्तिएर एकदमै न्यून मूल्यमा सेयर नबेचेको, होल्ड गरेको उनको दावी छ।
अहिलेको घटाइले लगानीकर्ता आत्तिएको अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
अहिले लगानीका अरू विकल्प स्पष्ट रूपमा नदेखिएको बताउँदै उनले भने, ‘बजार घट्यो भनेर बाहिरिए पनि हामी अहिलेको परिस्थितिमा गन्तव्यहीन त हुन सक्दैनौं।’
सीमित व्यक्तिले बुल चरण सकिएको हल्ला गरे पनि वास्तविक बुल आउनै बाँकी रहेको उनले बताए।
‘बजारको सुन्दर पक्ष नै घट्ने, बढ्ने हो। घटेका बेला किन्दै जाने हो। अब त झन् लाभांश पाउने बेला आएको छ,’ उनले भने।
लाभांश दिन सक्ने कम्पनीको सेयर सस्तो मूल्यमा पाउँदा खरिद गर्ने मौका यतिबेला आएको उनले बताए।
‘बजार घट्छ भनेर हल्ला गर्नुको साटो घट्दा पनि मौकाको रूपमा लिन सक्नु नै वास्तविक लगानीकर्तामा हुनुपर्ने विशेषता हो,’ उनले भने।
तर बजार घट्ने आधारहरू यतिबेला बलियो रहेको बताउँछन् अर्का लगानीकर्ता पिताम्बर खरेल।
हाल निक्षेपमा कर्जाको अनुपात (सिडी रेसियो) को सीमा राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशत तोकेको छ। यो कतिपय बैंकको सोभन्दा धेरै छ। त्यसलाई एक वर्षमा सीमामा झार्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कतिपय बैंकसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन जानेछ। यो कारण पनि बजारमा असर पर्ने उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढाउने अपेक्षा भएका बेला सोअनुसारको व्यवस्था हुन सकेन। जसले गर्दा बजार घट्नमा पनि दवाव पुग्ने उनको बुझाइ छ।
खरेलले भने, ‘लगानीयोग्य रकमको अभाव हुने संकेत देखा परेको छ। यसले भोलिका दिनमा ब्याजदर माथि जाने हो कि भन्ने आशंका पनि छ।’
लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन सक्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो भएको स्रोत जोगाउन भदौ १ देखि नै लागू हुनेगरी कतिपय बैंकले निक्षेपमा ब्याजदर बढाइसकेका छन्। अब ब्याजदर बढ्दै जाने उनको अनुमान छ।
यदि ब्याजदर बढ्दै जान थालेमा र कोरोना नियन्त्रण हुन थालेमा यो पटको ‘बुल’ चरण नै अन्त्य हुन पनि सक्ने उनले बताए। बजार घटेसँगै कारोबार घट्नुलाई खरिद गर्नेहरू सक्रिय हुन नसकेको अवस्थाका रूपमा पनि बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘भ्याक्सिन उपलब्धता बढेकाले अब कोरोना नियन्त्रणमा आउन सके लगानीका अन्य क्षेत्रहरू खुल्दै जान्छन्। त्यसले बजारलाई दवाव पार्न सक्छ।’
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिएकालाई पनि तिर्दै जानुपर्ने बाध्यता भएकाले स्वभाविक रूपमा बजारमा ठूलै गिरावट आउने उनको दावी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सेयर लगानीमा यसअघि नै कडाइ गरेको छ।
धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत संस्थाको सेयर तथा डिवेन्चरमा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि मात्रै बैंकहरूले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
‘राष्ट्र बैंकले त्यसअघि पनि बजारलाई नियन्त्रणमा राख्न बैंकहरूलाई सेयर लगानीमा कडाइ गरेको थियो। यो असर पनि अहिले देखिएको हो,’ खरेलले भने।
खरिद भएको एक वर्ष पूरा भएका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको एक प्रतिशत रकमसम्मको लगानी मात्रै बैंकहरुले बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कतिपयले बजारको प्राविधिक विश्लेषणलाई पनि आधार मान्ने गरेका छन्।
बजारलाई प्राविधिक रूपमा विश्लेषण गर्दै आएका राजु मुनिकार अहिले बजार केही करेक्सनमा देखिएको बताए। हाललाई ३०६५ को अंकमा केही टेवा पाउन सक्ने उनले बताए।
‘त्योभन्दा तल झरेमा बजारको करेक्सन केही ठूलो हुन सक्नेछ,’ उनले भने।
अहिले नै बुलको चरण सकिएको भन्न नमिल्ने उनले बताए। विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बुल/बियरको चक्र नै पूरा नभएको उनको दावी छ।
‘विगतका इतिहास हेर्ने हो भने बुलिस वा बियरिस ट्रेन्डले साढे ३ देखि ४ वर्षसम्मको एउटा चक्र लिएको हुन्छ, अहिलेको बुल चक्र दुई वर्ष मात्रै भएको छ,’ उनले भने।
यद्यपि अहिलेको सुधार केही दिनमै अन्त्य हुन पनि सक्ने वा ४–६ महिनासम्म लम्बिन सक्ने उनले औंल्याए। त्यसरी ठूलो सुधार आउँदा बजार २६ सयसम्म झर्न सक्ने उनको अनुमान छ। अब पहिलेको उच्च अंक ३१९८ को रेकर्ड तोड्न भने ठूलै चुनाैती रहेको उनको भनाइ छ।
हेर्नुस् पछिल्ला दिनको नेप्सेको ‘क्यान्डिलस्टिक’
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ९, २०७८, ०८:१८:००